3 Ways Oo Wadahadal Iibinta Ah Ay Isbadaleen Sannadaha | Martech Zone
3 Ways Wadahadal Iibsi Ah Ayaa Isbadalay Sanadaha
Talaado, Oktoobar 3, 2017 Chris Orlob
Wadahadalka iibka ee dhaqanka ayaa waligiis isbedelaya. Dadka wax iibiya mar dambe kuma tiirsanaan karaan qodobbada hadalka ee caadiga ah iyo moodellada daahfurista si ay ugu wareegaan wareegga iibka. Tani waxay u reebeysaa dad badan oo wax iibiya fursad kale oo aan aheyn inay dib isu soo uruuriyaan oo ay fahmaan xaqiiqda cusub ee waxa ka dhigaya wadahadalka iibka ee guuleysta.
Laakiin, intaanan tagin waxaa, sideen ku helnay halkan?
Aynu baarno 3 dariiqo oo wadahadalada iibku ay isbedeleen sannadihii la soo dhaafay. Adoo sahaminaya sida iibiyayaashu ugu adeegsan jireen wadahadalka qof wax iibsan kara, waan fahmi karnaa halka wadahadalka iibku ku wajahan yahay iyo xeeladaha cusub ee isbedelaya si wax ku ool ah loogu xiro heshiisyada xilligan casriga ah.
Maaddaama bulshadu isbeddelayso, dadku way is beddelaan, taas oo macnaheedu yahay dadka loo iibinayo inay iyaguna beddelaan. Waqti ka dib, isbeddelada ku dhaca fikirkooda, baahidooda, iyo dhaqankooduba way muuqdaan. Maalmahan, dadka loo iibinayo waxay aad uga aqoon badan yihiin markay la macaamilaan iibiya. Sharaxaadda alaabada, isbarbardhigga qiimaha, markhaatiyada macaamiisha, iwm ayaa si fudud looga heli karaa khadka tooska ah intaysan iibiyaha xitaa gelin sawirka. Tani waxay asal ahaan isbeddeleysaa doorka iibiyaha ee habka iibsiga. Waxay ka wareegeen macluumaad xiriiriye, la-taliye iyo abuuraha qiimaha.
U Wareejinta Iibinta Wadatashiga
Gawaarida iibka dhaqameed ma sii shaqeeyaan. Dadka wax iibiya waxay u baahan yihiin inay helaan waddo ay kula yeeshaan wada hadal laba dhinac ah rajadooda. Iibsadayaasha suurtogalka ah waqti uma hayaan dadka wax iibiya ee aan baarin ganacsigooda waxayna inta badan doorbidaan inay ka fogaadaan wada hadalka dheer ee “dareemida”. Waxay rabaan inay la macaamilaan dadka wax iibiya kuwaas oo horeyba u fahmay caqabadahooda gaarka ah iyo fursadaha gaarka ah iyagoo keenaya aragti cusub, xalinta dhibaatooyinka iyo abuurista qiime. Intaa waxaa sii dheer, "ku-habboonaanta", iyadoo ay weli tahay mid tayo fiican u leh iibiyaha inuu yeesho, mar dambe dammaanad kama qaadayo guusha. Daacad u ah iibiye gaar ah wuxuu yimaadaa oo keliya ka dib marka macaamilku ogaado qiimaha.
Wadahadal Iibsiyo Badan Oo Badan
Iib-ka-waji iibintu mar dambe ma aha habka ugu badan ee lagula xiriiro iibsadayaasha mustaqbalka. Farriinta qoraalka, adeegsiga baraha bulshada, email-ka, iyo martigelinta dhacdooyinka gaarka ah, dhammaantood waa hababka lagama maarmaanka u ah gudbinta farriintaada. Si kale haddii loo dhigo, dadka wax iibiya maanta waxay u baahan yihiin inay noqdaan shaqooyin badan, illaa heer. Mid kasta oo ka mid ah kanaaladahan ayaa saameyn ku yeelan kara iibsadayaasha, natiijadaasna, iibiyayaashu waa inay ballaariyaan oo ay bartaan inay si wax ku ool ah uga dhex shaqeeyaan.
Ma ahan wax qarsoodi ah. Wadahadalka iibka dhaqameed kama sii gaadhayaan natiijooyinkii ay hore u gaadheen. Wadadii hore ee wadahadalada iibka waxaa lagu badalay qaab firfircoon, hal abuur badan oo mabaadi'da hawlgelinta ah.
Helitaanka aan hore loo arag ee macluumaadka iyo ilaha, iibsadayaashu uma baahna iibin dambe. Waxay ubaahan yihiin iib la taliyaha.
Noocan cusub ee xirfadlaha iibinta wuxuu u baahan yahay inuu qaabeeyo wadahadal kasta oo iibsade iyadoo la muujinayo aragti dhab ah iyo inuu yahay mushkilad xallin oo bixisa xalka suurtagalka ah ee dhibcaha xanuunka gaarka ah ee shirkadda (xitaa haddii xalkaas aysan wax xiriir ah la lahayn shirkadda ama alaabada ay iibinayaan) . Dadka wax iibiya ee casriga ah waxay ka caawinayaan iibsadayaasha mustaqbalka inay gaaraan go'aano sifiican uga warqaba iyaga oo dhigaya bartanka wadahadalka. Iyagoo u diyaar garoobay wadahadalka iibka casriga ah, iyagu naftooda ayay isu dejinayaan inay ku baraaraan firfircoonida, xaqiiqda cusub ee iibka.
Tags: iibinta latashigaiibinta kanaallo badanwada hadalka iibkabeddelashada iibkaKordhinta Iibkaqaabka iibka
Chris Orlob waa Agaasime Sare ee Suuqgeynta Wax soo saarka ee Gong.io. - # 1 madal sirdoon wada hadal ah oo loogu talagalay kooxaha iibka B2B. Gong wuxuu kaa caawinayaa inaad baddelo dhuumahaaga u rogto dakhli adoo iftiiminaya wadahadalada iibkaaga. Waxay diiwaangelisaa, dib u qortaa, iyo falanqeeyaa wicitaan kasta oo iib ah si aad u wadi karto waxtarka iibka, u ogaado waxa shaqeynaya iyo waxa aan shaqeynin, oo aad si dhakhso leh u kiciso shaqaalaynta cusub.
“Macaamiisha Koowaad” Waa inuu noqdaa Mantra
Juicer: Ku soo ururi Dhammaan Quudintaada Warbaahinta Bulshadda ah Bog Web Wanaagsan